Idaacadda caalamiga ah ee Iswiidhen iyo howlaheeda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Idaacadda caalamiga ah ee Iswiidhen iyo howlaheeda
Publicerat måndag 18 september 2006 kl 09.59
Barnaamijyada caalamiga ah (= ee dalkan dibaddiisa loo baahiyo) kuna baxa luqado kala duwan waxaa loogu talo galey sidii loo wargelin lahaa dadka dhalashadoodu iswiidhsihka tahey ee ku nool dalkan dibaddiisa iyo iyo ajnabiga xiiseeya dhacdooyinka Iswiidhen.
Barnaamijyada ku baxa luqadaha kala duwan waxey badanaa ku wajahan yihiin ajnabiga ku dhaqan dalkan.
Barnaamijyada ku wajahan dibadda- Raadiyaha Iswiidhen - waxey ku baxaan luqadaha iswiidhishka, ingiriiska, jarmalka, ruushka, estooniyaanka iyo luqadda letiska.
Habka soo-yaalak ah ee dibadda loogu baahiyo barnaamijyo ayaa lagu fuliyaa mowjadaha dhexe iyo kuwa gaaban. Laga bilaabo saqaashameeyadii waxaa iyaguna la isticmaalaa dayaxgacmedyo, si barnaamijyada qaarkood loogu lallin karo dhageysteyaasha si toos ah, ( iyadoo la adeegsaneyo saxanka baraboolka oo u gaar ah) ama xarun kale ee idaacadeed si ey halkaasi ugu laliyaan cidda barnaamijkaasi ku wajahan yahey. Waxaa kaloo iyaduna jirta in sidaasi oo kale siyaabo kala duwan dalka dibaddiisa loo gaarsiiyo barnaamijyo kala duwan ee ka baxa idaacada iswiidhishka. Heyadda Internetka ayaa iyadu noqotey mid wax ku ool ah. Martida soo booqata boggaga internetka waxey go’aankeeda leeyihiin goorta iyo barnaamijka ey dhageysaneyaan.
Barnaamijyada dhaqammada iyo dadyoowga kala duwan. Waxey ka caawineyaan sidii ey ajnabiga iyo dadka asal ahaan iswiidhishka ahi fahamkoodu isugu soo dhowaan lahaa. Barnaamijyadaasi waxey ku baxaan luqadaha albaaniga, carabiga, asiiriska/asiiriyaanka, kurdiga, faarsiga, boolishka, serbiga/kruweeshiyanka/bosniska, soomaaliga, isbaanishka, iswiidhishka iyo turkiga. Halheyska ugu sarreeya ee barnaamijyada ku baxa luqadaha kala duwan ayaa ah ”in laga eegeyo indhaha iswiidhishka” Huvudslogan för programmen på främmande språk är det svenska perspektivet. Waxaa jirta in gaar ahaan qaxootiga ey qiimo gaar ah ugu fadhiyaan wararka la xiriira dalalkoodii. Hase yeeshee midda ugu muhiimsani waxey tahey in surrtogal qofka loo siiyo sidii wax badan uga ogaan lahaa dalkan Iswiidhen, waxyaabaha ka dhaceya, sababaha kalifey iyo sida ey saameynta ugu leedahey. Barnaamijyada ku baaha luqadda iswiidhishka waxey ku wajahan yihiin bulshada dalkan. Barnaamijka lagu magacaabo Brytpunkten (= xarunta kala qeybisa) waa barnaamij kala qeybiya. Siyaabo kala duwan ayuu barnaamijkaasi wax u qeybiyaa, oo aan aheyn oo keliya luqadda jaban ee barnaamij soo saareyaasha, sidoo kale waxey soo shaac bixiyaan arrimmaha aan sida caadiga aheyn laga hadal, waxyaabaha aan caadiga aheyn, fikraddaha khaldan ee cid laga qabo iyo waxyaabaha na cabsi geliya e nagu cusub. Barnaamijka Passet ayaa isaguna ah barnaamij looga doodo dhacdooyinka , iyo sidii ey uga qeyb qaadan lahaayeen codad dheeri ah lana xirtiira mustaqbalka doodaha bulshada.
Waxaa kaloo idaacaddan ka baxa barnaamij lagu baahiyo luqadda roomaani kaasi oo biloowdey kadib kolkii luqaddaasi loo aqoonsadey si caalami ah iney tahey luqad ey ku hadlaan dadyoowga laga tirada badan yahey ee dalkan Iswiidhen.
Dib u baahinta barnaamijyada ee dalka dibaddiisa.
Dib u baahinta barnaamijyada ayaa ah kuwo aad u baahey. Xiriirka wada shqeyn ee adduunweynaha aya dib u baahiya barnaamijyo dhan ama qeyb ka mid ah oo idaacaddani soo saarto ayaa si toos ah uga baahiya goobahaa. Sidaasi oo kale waxey idaacadda Istokholm dib uga baahisaa mowjadda 89,6 MHz iyo weliba raadiyaha qaranka ee DAB, barnaamijyo fara badan ee kala duwan ee ey soo saareen idaacado kala duwan ee adduunweynaha ku baahsan. Barnaamijyadaa oo isugu jira warar-iyo barnaamijyo la xiriira dhaqanka sidaasi oo kale barnaamijyo maaweelo. Barnaamijyadaasi waxey badankood ku baxaan luqadda Ingiriiska.